မရမ်းနီသွေး ပန်းကလေး – Fuchsia Flower | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Environment » မရမ်းနီသွေး ပန်းကလေး – Fuchsia Flower	30
မရမ်းနီသွေး ပန်းကလေး – Fuchsia Flower
Posted by ဇီဇီ on May 12, 2015 in Environment, Home & Garden, Photography, Society & Lifestyle | 30 comments
Fuchsia ဆိုတာ မရမ်းနီ ရောင် ကို ခေါ်တာပါ။
အဲ ဒီ နာမည်နဲ့ ပန်း ရှိတာကိုလည်း မသိပဲ မတော်တဆ သွားရိုက်ခဲ့မိတယ်။
ပြီးမှ လိုက်ရှာတော့ Fuchsia ပန်း ပါတဲ့။
အရောင်စပ်ပုံက အရမ်း လှတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
တကယ် က ဒီ ပန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူက ဂျာမန်လူမျိုး Leonhart Fuchs (1501–1566) ပါ။
နောက်တော့မှ ဒီ ပန်း ရဲ့ အရောင် မျိုး ကို Fuchsia Colour လို့ လိုက်ခေါ်တာပါတဲ့။
ဒီလိုမှန်းသိ အများကြီး ရိုက်လိုက်တယ်။
ခုတော့ ရလာတာ နည်းတာ။
အပွင့်ရဲ့ အပေါ် က အရောင်က Fuchsia အရောင် ပါ။ အလင်းနဲ့ ဆိုတော့ အနီဘက်ကို လုနေတယ်။ အောက်ဖက်က ခရမ်းနဲ့ တွဲထားတော့ အရမ်းလှတဲ့ ကောင်မလေး အရောင်ရွေးချယ်မှု ရူးရူးရဲရဲဖြစ်သလို ခံစားရတယ်။
ဒါကတော့ မရမ်းနဲ့ တွဲထားတဲ့ Fuchsia
ဒီ ခရမ်းနု ကိုတော့ ကြည့်ရပြေပြစ်သလို ခံစားရတယ်။
ခြုံမျိုး ဆိုတော့ ခြံတံတိုင်းပေါ် နွယ်ခိုင်းပြီး စိုက်ရရင် ကောင်းမယ်။
ပန်း အရောင်အသွေး မျိုးစုံ မြင်ချင်ရင်တော့ Fuchsia လို့ ရိုက်ပြီးသာရှာလိုက်တော့။ အရမ်းလှတယ်။
ရုံးက အမ က ဖူးရှားး ပန်းတွေ ပိုရိုက်လာလို့တဲ့။ လာပေးလို့တင်လိုက်ပြီ။
မမရဲ့ အခေါ် ဆို ၁၁ ကျပ်ကျပန်းးး၊ ခိခိ
Mike says: .Fuchsia ပန်းတဲ့လား..မြန်မာပြည်မှာရောရှိလားမသိ
..မေမြို့မှာနေဖူးပေမဲ့ အဲ့ပန်းမျိုး မတွေ့ဖူးဘူး..လှတယ်
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့ မိုက်မိုက်ရေ။
အောင် မိုးသူ says: မြန်မာပြည်မှာ စိုက်လို့ရလားမသိဘူး။ ပန်းပုံစံလေးက လှလိုက်တာ။ အရမ်းသဘောကျတယ်။
ခင်ဇော် says: အင်းပါဆို။
အောင် မိုးသူ says: နွယ်မျိုးပဲ……ကြည့်ရတာခေါင်ရမ်းစပ်တယ်ထင်တယ်။
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖွေးဖွေးလောက် မလှသလိုပဲ…
ခင်ဇော် says: ဖွေးဖွေးက မွှေးလား
Mr. MarGa says: သူက ပွင့်ခံရွက်(sepal) က အရောင်​ထင်​ရဲ့
ခင်ဇော် says: မသိပါဘူးအေ။
အရောင်ကတော့ နာ တို့ အခေါ် မယ်ဇူရောင် လိုလို အသီးကွဲရောင်လိုလိုနဲ့။ ပန်းက လှတယ်
Wow says: အရောင်စပ်ရဲရင့်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ အရောင်တွဲဖက်ပေးထားသလိုပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ဒါပေမဲ့ မော်ဒယ်(လ) က လှတယ်နော်။
Wow says: ရီုက်တဲ့မော်ဒယ်က မြင်ရ၀ူးလေ အိမ်က Fairy tale ထဲက အိမ်လေးလိုပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ဘူးလေ။
ဝါး ပြောတဲ့ ဒီဇိုင်းနာ ဆင်ထားတဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်ထားတာကပန်းကလေးတွေလို့ ပြောချင်တာ။,
အောင် မိုးသူ says: မရမ်းစေ့ရောင်ပေါ့…. အဲ့ဘက်လည်း လိုက်တယ် အရောင်က။
မရမ်းစေ့ မှာ ပန်းဖောက်တဲ့ အရောင် လို့ ပြောမယ်ထင်တယ်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: Magetna တို့အမျိုးကိုး
အလယ်​​ခေါင်​နီတဲ့ တရုတ်​စကားပန်းတမျိုးလည်း အနှီကာလာရှိသဗျ
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်၊.
စက္ကူပန်းမှာ ပေါပေါများများ တွေ့ရတဲ့ အရောင်မျိုးးး
၂ ရောင် စပ်တာ ရဲတင်းလို့ အလှပိုတာ။
နိ ပြောတဲ့ အပွင့်က က မလေးရှားစကားလို့ ခေါ်တာမိုး
aye.kk says: မယ်ဆိုင်ဖက်က(ထိုင်း)
black chaw says: ပန်းဆိုတာမျိုးကတော့ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဆင်းနဲ့
ကမ္ဘာမြေကြီးကို အလှဆင် နေကြတာပါပဲ…။
သူတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မွှေးရနဲ့လေးနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို
နှင်းဆီကလည်း နှင်းဆီ မို့
Fuchsia ကလည်း Fuchsia မို့…။
သူ့ အဆင်းနဲ့သူ သူ့ ရနံ့ နဲ့သူ…။
ပန်း တွေ ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ သဘာဝ တရားကြီးရဲ့ အလှကို
ဓါတ်ပုံဆြာ ခင်ဇော် ရဲ့ စိတ်တွေကလည်း
ခင်ဇော် says: စိတ်ကတော့ နူးညံ့ ပါတယ် အဲဒီ တဒင်္ဂပေါ့။
အရီး လေး says: လှတယ်​ ခုမှမြင်​ဘူးတယ်​
ခင်ဇော် says: သများရောပဲ။
ဒီလောက်လှတဲ့ပန်း ရှိမှန်း ခုမှ သိတယ်။
Ma Ei says: အတော်လှတဲ့ပန်းကလေးတွေဘဲ…
ပုံစံလေးကော အရောင်တွေကော လှ လို့ ပ လို့…
ပန်းမျိုးစုံ လှပဝေဆာနေတဲ့ ခြံကြီးတစ်ခြံထဲက
သူများကို လောဘကြီးလို့များ ပြောကြမှာလားဟင်…
ခင်ဇော် says: ဟင့်အင်းး
Ma Ma says: အဲလိုဇောက်ထိုးပွင့်တဲ့ပန်းတွေ ကလောမှာ တွေ့ခဲ့လို့ ရိုက်လာခဲ့တယ်။
ပိုစ့်တင်ဖို့ လုပ်နေတာ….. လာမယ်နော်။
မြန်မလား နှေးမလားတော့ ကွန်ကိုပဲ ……..
ခင်ဇော် says: ဂါဝန်ရောင်စုံ ဝတ်ထားးတဲ့ ကလေးးမလေးးတွေ အတိုင်းးပဲ
မြစပဲရိုး says: ဇီ ရဲ့ ဒီပန်း တွေ ကို ဘိုလို မျက်စိရှမ်း သွားလဲ မသိ။
ကင်မရာကောင်းလို့လား၊ လူတော်လို့လား၊ ပန်းကလှလို့လား၊ ရာသီက ပွင့်လို့လား ???
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းလေး တွေ က အရန်းကို လှပြီး စို နေတော့တာ။
ဒီမှာလဲ အဲဒီလို အပွင့်ဆန်ဆန် တွေ့ဖူးတယ်။
အခုဆို အိတ်ထဲ ကင်မရာပေါက်စ လေး ထည့်ထားပြီး မြင်မြင်ရာ ရိုက်နေတာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပါတ်ထဲ ကိုယ့် ရှေ့ နှစ်ကားကျော်မှာ ဖြစ်လိုက်တာကိုတောင် မှတ်တမ်း တင်လိုက်သေး။
ဒီ ရောဂါ က ကူးစက်တာ မြန်တာ ကောင်းကောင်းကြီး သိလိုက်ပါပြီ အသင်လောက။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါတယ် ဆို။
ခု သများ ပီစီ တခုလုံး ဘာပန်းတွေမှန်းမသိတဲ့ ပန်းတွေနဲ့။
Ma Ma says: (အခုဆို အိတ်ထဲ ကင်မရာပေါက်စ လေး ထည့်ထားပြီး မြင်မြင်ရာ ရိုက်နေတာ )
အဲဒီရောဂါက ဘယ်အချိန်ကစပြီး ကူးစက်လာမှန်းမသိပဲ ရောဂါရင့်မှ သိလိုက်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.